Bokin' ny Levitikosy - Wikipedia
Ny Bokin' ny Levitikosy na Bokin' ny Levitika na Bokin' ny Fisoronana izay hafohezina amin' ny hoe Levitikosy na Levitika na Fisoronana dia boky fahatelo ao amin' ny Baiboly, hita ao amin' ny Testamenta Taloha, izay miresaka sy mitantara ny amin' ny fanompoam-pivavahan' ny Israelita izay nankinina tamin' ny fokon' i Levy. Boky mitambatra ao amin' ny Pentateoka (boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly) na ny Torah ny Levitikosy, isan'ireo atao hoe bokim-pisoronana na bokin' ny mpisorona.
2.1 Ny amin' ny fanaovana sorona sy fanatitra
2.3 Ny lalànan' ny fahadiovana
2.4 Ny lalànan' ny fahamasinana
Ny teny hoe Levitikosy dia fanagasiana ny teny grika hoe Λευιτικός / Leuitikós. Ny hoe Levitika kosa dia avy amin' ny teny frantsay hoe Levitique izay avy amin' ny teny latina hoe Leviticus. Io indray dia avy amin' ny teny grika etsy ambony izay midika hoe "momba ny Levita", "momba ny asan' ny Levita". Ao amin' ny Tanakh anefa izy dia atao hoe ספר) ויקרא) / (Sefer) Vayikra izay midika ara-bakiteny hoe "(Boky) Ary niantso Izy", izany hoe Adriamanitra niantso.
Ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia ao amin' ny sokajy voalohany atao hoe Tôrah ny Sefer Vayikra, fa ao amin' ny Baiboly kristiana kosa dia isan' ny Pentateoka ny Bokin' ny Levitikosy na Levitika.
Azo zaraina telo ny Bokin' ny Levitikosy araka ny karazan-dalàna andidiany.
Ny amin' ny fanaovana sorona sy fanatitraHanova
Ny fanokanana mpisoronaHanova
Ity fizaràna ity (Lev. 8-10) dia mitantara ny nanokanana an' i Aarôna sy ireo zanany amin' ny asam-pisoronana, miresaka ny amin' ny fisoronana voalohany nataony, ny nanasaziana an' i Nadaba sy Abiho tamin' ny nanaovany fanatitra tsy ara-dalàna, ary miresaka antsipiriany maro momba ny mpisorona.
Ny lalànan' ny fahadiovanaHanova
Ny fizaràna fahatelo (Lev. 10-16) dia miresaka momba ny fahadiovana, dia ny fahadiovan' ny sakafo, ny fahadiovan' ny vehivavy, ny habokana sy ny aretina hafa mitovitovy aminy, ary ny andro fanadiovana lehibe.
Ny lalànan' ny fahamasinanaHanova
Ity fizaràna ity (Lev. 17-18) dia momba ny lalàna mifehy ny vahoaka, ny lalàna mikasika ny mpisorona ary ny amin' ireo andro firavoravoana.
Ireo toromarika sy lalàna isankarazanyHanova
Ny fizaràna farany (Lev. 17-23) dia miresaka ny amin' ny lalàna isan-karazany mifehy ny fanadiovana, ary ny momba ny fahotana amin' ny fanoherana ny Lalàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Levitikosy&oldid=1041801"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 19:21
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 19:21 ity pejy ity.